Iimpawu ZikaJohane Zokuphumelela - Idiomatic Story
Iilwimi Ufunda isicatshulwa
Iimpawu zeJohn zokuphumelela
Funda iIdims ngokuFunda
Nali ibali malunga nomntu osomashishini ophumeleleyo kwaye wanikela ngoncedo kubantu abancinci abaye bafundisa. Uya kufumana iinkcazo zeengcamango kunye nemibuzo emfutshane kwezinye iindibano ekupheleni kwebali. Zama ukufunda ibali ixesha elilodwa ukuqonda isicatshulwa ngaphandle kokusebenzisa izichaso zesaziso. Ngokufunda kwakho okwesibini, sebenzisa iinkcazo kukukunceda uqonde isicatshulwa ngelixa ufunda iimpawu ezintsha.
UJohn ungumntu oshishino ophumelelayo kwaye ophumelelayo. Ngaloo ndlela, uyathandwa kakhulu njengomcebisi. Uyathanda ukubonisa abaqeqeshi abancinci iindophi. Into yokuqala ayithethayo kukuba umsebenzi wakhe ngokuqinisekileyo awuhlali uhamba ngokuhamba kakuhle. Enyanisweni, wafunda izifundo ezininzi endleleni. UJohn wathi: "Okokuqala nangakumbi, akakholelwa ukuba uphumelele uvela ezulwini." Uthe wonke umntu odibene naye wayenama-rags afanayo kwimbali yobutyebi, kwaye ukuba umsebenzi omningi wawunempumelelo.
UJohn ukholelwa ekusebenzeni kanzima, kodwa ekufumaneni amathuba afanelekileyo. "Kubalulekile ukuba ungalokothi usasaze kakhulu" uJohn wacebisa. "Ukuba unamathotho amaninzi emlilweni, ngokuqinisekileyo uya kulahlwa yithuba langempela" waqhubeka. "Ndibonile abantu bexakeke nje ngeenyosi abangakhange babonakale benza nantoni na." Xa ndicinga ngale ngcebiso, ndandiqonda ngakumbi oko wayethethayo.
Ukuba ubeka ingcamango yakho yokucinga, uya kubona ukuba akunakwenzeka ukuba ugxininise ukuba kufuneka ukhathazeke malunga nezinto ezimashumi mahlanu. Esinye isifundo esibalulekileyo kukuba kubalulekile ukwazi ukuba kwicala lesonka sakho sithiniwe kwaye qi ni sekise ukuba unike loo nto ingqalelo. Ngamanye amagama, kufuneka ugibele isitimela se-gravy.
Ungaqali ukukhangela imingeni emitsha ukuba yonke into isebenza kakuhle!
UJohn wagxininisa ukuba ubuchule obubalulekileyo boshishino-mpahla obuyimpumelelo kwaba kukubona kwengqondo ukuba angayisebenzisi kuphela ithuba, kodwa ukugcina iso lakho kwibhola. Abanye abantu bakhawuleza ekufumaneni, kodwa ke bayaxhalaba. Kubalulekile ukuba uhlale ungaguqukiyo, kodwa ungasasazeka. Ekugqibeleni, qiniseka ukuba ungalokothi ubonise isandla sakho kubachasi bakho. Kwimeko nayiphi na, yile ndlela yokuphumelela ngoYohane.
Idioms ezisetyenziswe kweli bali
ukuhamba ngokulula = ubomi obulula ngaphandle kweengxaki
uyazi ukuba yeyiphi isondlo sesonka esisetyenziselwa ukuba = ukuqonda oko kubaluleke kakhulu kuwe
ukukhwela isitimela = ukwenza imali ngokwenza into ebonakalisiwe ukuba iphumelele
gcina iso lakho kwibhola = ukugxila kunye nokuqhubeka uqhuba kakuhle
mana evela ezulwini = ubutyebi obumangalisayo
ukusuka kwiingcongolo ukuya kwintsimi = kwihlwempu ukuya kwisityebi
bonisa omnye izithinte = ukucacisa nokubonisa ngomzekelo ukuba kukho into eyenziwe ngokufanelekileyo
uxakeke nje ngeyosi = uxakeke kakhulu (uxakeke nje nge-beaver)
sebenzela okulungileyo = ukuphelisa ngesiphumo esihle kakhulu
ngokukhawuleza ekufumaneni = ukuqonda ngokukhawuleza
ukuba nobukho beengqondo ukwenza into = ukuba uqaphele kwaye ukwazi ukuqonda ithuba
bonisa isandla sakho = ukubonisa abanye izinto ezinokubaluleka kwimeko
ukubeka kwisicatshulwa somntu = ukugxila
zisasaze kakhulu = ukwenza izinto ezininzi
Uninzi lweentsimbi emlilweni = ukwenza izinto ezininzi
Umhlobo wam u ________________ kule mihla. Akaze athole ixesha lokuphumla.
Sine thamsanqa ebomini. Kuye _____________ ukususela ekuqaleni.
Ndiqinisekile ukuba imeko iya kuphucula. Iza ku _________________.
Kufuneka u ____________________ kule ngxaki. Kudinga uninzi lwengxinano.
Alan ___________________ ngethuba leengxoxo kwiintengiso zoshishino.
UFranklin waya e ________________ ebomini bakhe. Waqala ngento kwaye waphela umntu ocebile kakhulu.
Abanye abaculi banenhlanhla kwaye banokutshatyalaliswa kakhulu kwangoko ebomini. Emva koko ba ______________________ kwiminyaka emininzi emva koko.
Umphathi wam _________ mna ______________ emsebenzini ngenxa yokuba yayiyiveki yokuqala.
xakeke nje ngeyosi
ubeke ingqalelo yakho
wabonisa isandla sakhe
Iimpawu ezingakumbi kunye neenkcazo kwiimxholo zomxholo
Funda amazwi amaninzi usebenzisa amabali kunye nenye okanye ngaphezulu kwezi ziqendu ezikwimeko yomxholo kunye nemibuzo .
Kubalulekile ukufunda nokusebenzisa iimpawu kwiimeko. Ewe, iidemon azihlali zilula ukuqonda. Kukho izixhobo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezinokuncedisa ngeenkcazo, kodwa ukuzifunda kwiibali ezimfutshane zingabonelela imeko eyenza ukuba ziphile.
Ukhetho lukaMongameli - Ukuqonda ukuFunda
Ingxoxo: I-Presentation Business
I-Oregon Weather Forecast
Ukupapashwa komsebenzi ukuthanda nokungazithandi ukuvalelwa kokulalela
Ukuphucula izakhono zokuFunda
Ukunikezela ngeengxoxo zeeNtetho
Ukuqondisisa Ukuqala Kwabaqalayo - I-Ofisi Yam
Isingeniso kwiiNgqungquthela zeziFundo zeNgesi
Imibuzo kunye neNkcukacha ezininzi zokuCwangcisa: Ukucwangcisa iqela
Ingxoxo yokuqala: Usuku oluhle
UJohn F. Kennedy: Ukuqonda ukuFunda kwe-ESL
Kutheni uMikayeli oyiNtloko yoMlilo?
Ukuzimela ngokuzimeleyo (i-Possession)
Uluhlu lwe-'Engenayo i-Microwave '
Iindlela zokufunda iilwimi ezingenangqondo zePerky
Ingqungquthela yaseMzaneni: I-Hairdo ye-Fatal
Iimbangela zeNguqulelo yaseLatin America
Abangubani Abafazi BakaKumkani uSolomon?
5 iindlela zokuhlala zikhuthazwa
Ukufumana iipenali zamaPeni angaphandle
Imithetho yoMongameli kaMongameli
Ukuxhatshazwa kwabasetyhini Amaphuzu okujika: 1913 - 1917
Izigqeba ezithintekayo kunye nezingezantsi
UJoseph Eichler - Wenza i-West Coast namhlanje
Ukwenqaba - Ukuwayeka
Ubumnandi bokuBomi kaMarley noMculo
Indlela yokwenza i-DNA Model kwi Candy
Quotes Anne Hutchinson